आज श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन के लेखेको छ तपाईंको राशिफलमा ? – Pahilo Page
आज श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन के लेखेको छ तपाईंको राशिफलमा ?
१९ श्रावण २०७७, सोमबार ११:५० 586 पटक हेरिएको
वि.सं. २०७७ साउन १९, सोमवार । श्रावण शुक्लपक्ष । पूर्णिमा, २०ः३६ उप्रान्त प्रतिपदा ।
महिनेतले लक्ष्यमा पुराउनेछ । प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । नाम, दाम र इनाम कमाउने बेला छ । पदीय जिम्मेवारी प्राप्त हुने सम्भावना छ । समुदायको हितमा लोकप्रिय काम गर्न सकिनेछ । नोकरी र व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा हुने समय छ । छोटो समयमा पुरुषार्थी काम सम्पादन हुनेछ । प्रयत्न गर्दा दिगो कामको जग बसाउन पनि सफल भइनेछ ।
अस्वस्थताले काममा जुट्न बाधा पर्नेछ । परिस्थितिवश आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन् । सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई भाग्यले साथ दिनेछ । असल मित्र, शुभचिन्तक वा जीवनसाथीको सहयोग प्राप्त भइरहनेछ । धेरै आम्दानी नभए पनि व्यवसाय सामान्य रूपमा चल्नेछ । बिग्रिएको काममा दोहोराएर प्रयत्न गर्नुहोला । सेवामूलक काममा प्रवृत्त भइनेछ ।
दौडधुप गर्नुपरे पनि काम अधुरो रहला । व्यस्तता बढ्नेछ भने शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ । गोप्य सूचना बाहिरिन सक्छ । हुलमुलमा धनमाल जोगाउन अलि सजग रहनुपर्ला । स्वास्थ्यका लागि आराम र खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला । यात्राको प्रक्रियामा बढी खर्च हुनसक्ने देखिन्छ । आफ्नो उपलब्धिमा अरूले दाबी गर्ने सम्भावना रहेकाले गोपनीयतामा ध्यान पुराउनुहोला ।
नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन् । पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ । काम बन्नुका साथै धनलाभ हुनेछ । बिछोडिएका आफन्तसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ । विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ । लगनशीलताले लक्ष्यमा पुराउनेछ । विशेष उपहार प्राप्त हुन सक्छ । मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिनेछ भने दिगो कामको जग बसाउने समय छ ।
चुनौती पन्छाएर पनि काम बनाउन सकिनेछ । स्वास्थ्य सबल बन्नुका साथै काममा उत्साह जाग्नेछ । शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन् भने प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ । ईष्र्या गर्नेहरूले हार खानेछन् । व्यापारलगायत अर्थ लाभ हुने योजना प्रारम्भ गर्न सकिनेछ । मिहिनेत गर्दा उपलब्धिको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ । दिगो काम थालनी हुनेछ । पछिका लागि पनि सकारात्मक संकेत प्राप्त हुनेछ ।
उपलव्धिका लागि परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । समयतालिका नमिल्दा आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन् । स्वास्थ्यका लागि खानपानमा ध्यान दिनुहोला । मिहिनेत गर्दा अध्ययनमा प्रगति हुनेछ । नियमित काम र व्यवसायमा लाभ हुनेछ । महत्वाकांक्षा पूरा नभए पनि पहिलेको उपलब्धि जोगाउन सफल भइनेछ । आर्थिक स्थितिमा पनि सुधार आउनेछ ।
धेरै लाभ उठाउन नसकिए पनि समस्या सुल्झनेछन् । तत्कालको फाइदा हेर्दा परिस्थिति बिग्रन सक्छ । पहिलेका कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । भूमि तथा पशुधनबाट लाभ मिल्नेछ । परिवारमा आमाको माध्यमबाट काम बनाउन सकिनेछ । टाढिएका आफन्त नजिकिनेछन् । अरूको व्यवहारले शंका उब्जाए पनि मान्यजनको सुझाव शिरोधार्य गर्दा अवश्यै लाभ हुनेछ ।
पुरुषार्थद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सफल भइनेछ । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ । गरिएका कर्मको छोटो समयमै उचित प्रतिफल पाइनेछ । स्रोतसाधन जुट्नाले उद्योग र व्यापारमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा हुनेछ । मिहिनेतले दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ ।
अध्ययनमा प्रगति हुनेछ । ज्ञान र कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । बुद्धिले काम लिँदा चिताएको योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ । अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ । व्यापार र पेसाबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ । मिहिनेतले पेसागत उचाइमा पुराउन सक्छ । गुमेको स्थान प्राप्त हुनाले आफ्नो वर्चश्व पनि बढ्नेछ ।
दिगो योजनाका लागि ऋण लिने समय छ । खर्च लागे पनि लगानी बढाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपरे पनि उपलब्धि हातपार्न सकिनेछ । शुभचिन्तकहरूको सहयोग प्राप्त हुनेछ । तर सानो कामलाई अधिक समय खर्च हुनेछ । बेसुरको निर्णयले पछिलाई समस्या पर्न सक्छ । छर–छिमेकमा असमझदारी बढ्नेछ । केही आफन्त पनि टाढा हुनेछन् ।
आयआर्जनका स्रोत बढ्नेछन् भने व्यापारमा पनि राम्रै फाइदा हुनेछ । भौतिक साधन जुट्नाले प्रसन्नता मिल्नेछ । मिहिनेत गर्दा राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ । दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ । प्रतीक्षित नतिजाले पनि उत्साह जगाउनेछ । विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन् भने पछि फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ । तारिफयोग्य कामले राम्रो उपलब्धि दिलाउनेछ ।